Kurt Angle akashamisika Christian Cage kwete iyo WWE Horo yeNzara - Wwe
'Haasi kukosheswa' - Kurt Angle akashamisika kuti nyanzvi yepamusoro haisi muWWE Hall of Fame
Kurt Angle akataura pane akati wandei misoro panguva yezvazvino episode yepodcast yake pa AdFreeShows.com , uye aimbova WWE Champion akagovanawo pfungwa dzake pabasa raChristian.
Christian parizvino ari pakati pekumhanya zvine mutsindo sezvo achangotora IMPACT Wrestling World Championship kubva kuna Kenny Omega. Angle akataura kuti muKristu ndomumwe wevanyanzvi vekunetsa varwi nguva dzese uye akashamisika kuti Captain Charisma anga asiri muWWE Hall of Fame kare.
vangani vanyoreri ane james charles akarasika
Ipo muKristu asisiri muWWE, Kurt Angle achiri kuona aimbova WWE waanoshanda naye achipinda muImba yeMukurumbira mune ramangwana:
'MuKristu ndemumwe wevanonyanya kudzikiswa pasi nyanzvi dzewrestling yenguva dzese. Uyu mukomana anofanira kunge atove muImba yeMukurumbira. Ndiwo magariro aaiita, uye handizive, pamwe rimwe zuva achazove. Ini ndinongofunga anga asiri kukosheswa, 'akadaro Kurt Angle.
Iwo Mukaka-O-Mania pane Iyo Kurt Angle Show! Teerera mangwana kwese kwaunofarira podcast, kana WATCH @theanglepod kutanga uye kushambadzira pasina @adfreeshows ! pic.twitter.com/Lf5u7tzxRn
- Kurt Angle (@RealKurtAngle) Nyamavhuvhu 14, 2021
Isu taive shamwari dzepamwoyo: Kurt Angle pahukama hwake nemuKristu
Kurt Angle uye Christian vakagovana hukama hwepedyo kwemakore akati wandei pavaifamba pamwechete muWWE mukutanga 2000s. Angle, Christian, Edge, naRhyno vaive shamwari dzepamwoyo uye vaizivikanwa seTimu RECK.
Angle yakaratidza kuti anoramba achitaurirana neChristu sezvo ivo vachizivana kwenguva refu. Gamba reOlymicic rakatenda kumuKristu nezvezvaakamuitira uye bhizinesi rekupokana:
'Imwe nguva nenguva, tinobata base. Iye akanaka mukomana akadaro. Takanga tiri shamwari dzepamwoyo. Edge, Christian, ini, uye Rhyno. Isu taive shamwari dzepamwoyo. Takapedza nguva yakawanda tiri pamwe chete, uye nguva iyoyo yaikosha kwazvo. Handimbofi ndakakanganwa zvaakandiitira, [uye] nezvaakaitira iro bhizinesi, 'akawedzera Angle.
Christian arikunyatsoshandisa chinzvimbo chake chitsva semushandi wemu-in-ring, uye akapihwawo mubairo wekuedza kwake kuhwina mukombe wepasi rose pachiitiko cheAEW Rampage.
Fans vakashuvira kuona Christian Cage muWWE Horo yeMukurumbira, asi rukudzo ruchazofanira kumirira sezvo mukurumbira mutsimba achine bhizinesi risina kupera mukati medenderedzwa.
Kana paine chero makotesheni anoshandiswa kubva kuchinyorwa chino, ndokumbira utenge Kurt Angle Show paAdFreeShows.com uye upe H / T kune Sportskeeda Wrestling.
Pane chiitiko chazvino cheSmack Talk, mutsimba wewrestling, Dutch Mantell akabatana naRick Ucchino naSportskeeda kuti vaputse Shinsuke Nakamura's Intercontinental Title kuhwina paWWE SmackDown, pamwe neChristian Cage's IMPACT World Championship kukunda paAEW Rampage.
Tarisa uone iro rese vhidhiyo pazasi:
Nyorera kune iyo Sportskeeda Wrestling YouTube chiteshi kune zvimwe zvakadaro zvemukati!
Kutonga kwevaRoma kunodonhedza zano hombe pamusoro pekuti mutambo neThe Rock zvichaitika riini
34 MaNative American Quotes Akazara Euchenjeri Kuti Urarame Hupenyu Hwako Na
WWE Mari muBhangi: 5 zvikonzero nei Daniel Bryan achifanira kuhwina Men's Manera Mateki
Lars Sullivan pakupedzisira anoputsa kunyarara kwake paWWE kusunungurwa
'Chimwe chezvinhu zvinotyisa zvandanga ndambove ndakapfuura': Jeffree Star inoratidza zvimwe zvakawanda nezve tsaona yake yemotokari
5 Nzira Bullet Club inogona kuzunza zvinhu kumusoro muna 2021
3 WWE Superstars vane matauriro aive enhema uye 2 avo vari vechokwadi
6 Simba Rinekusimbisa Kurwisa Kushushikana Uye Kufunganya
Maitiro Ekutora Pamusoro peMusikana Wako Wekare: Matipi 8 Anoshanda Chaizvo!
WWE Mari muBhangi 2021: 3 zvinhu zvisingafanire kuitika pakubhadhara-pe-kuona uye zvinhu zvitatu zvinofanirwa - Kukanganisa neRome Reigns, zita shanduko, kudzoka kukuru?
Ndiani mudzimai waNe-Yo, Crystal Renay Smith? Zvese nezvemuchato wavo sezvavanogamuchira mwana wechitatu
nzira yekurega kuenda kwekushushikana muhukama
will cm punk kurwa futi
nzira yekukunda nayo mhosva yekubiridzira mumwe munhu
sei kudzorera hukama kumashure
maitiro ekuita nekutorwa zvisina basa